12ka Maalmood ee Ciida Kirismaska ​​2019 | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » content abuurkii » Audio » Maalmaha 12 ee Ciida Kirismaska ​​2019
Maalmaha 12 ee Ciida Kirismaska ​​2019
Xilligan Kirismaska ​​wuxuu leeyahay qof walba oo ku dabaaldegaya qaab-fasaxeed! Xitaa tikniyoolajiyadda caliber aadka u sarreeya ee naga midka ah kuwa ka soo baxa warbaahinta iyo warshadaha soo-saarka ayaa diyaar u ah Ciidda Masiixiga ee kacsan! Iyada oo run la iiga dhigo dhaqanka ciida, waxaan weydiiyay kuwa ku jecel ciida Kirismaska ​​qaar badan oo ka mid ah kanaalkeena warbaahinta bulshada: "Haddii aad ka heli lahayd toy wax soo saar qabow Christmas-ka, markaa maxay noqon laheyd?" Nasiib yar iyo codbixinta, waxaan awoodnay inaan sameysanno liis u gaar ah alaabada lagu ciyaaro oo qof walba ku raaxeysto! Laakiin qorshayn mayno inaan qaadno amaanada oo dhan markii uu odaygii wanaagsanaa ee Nick Nick Chimo-in aanu qof walba siinay gacan gacan ka siinta soo bandhigida xulkeena. Taasi waa sax, laba iyo toban shey oo kala duwan - mid maalin kasta ah!
Waa xaqiiqo lama taabtaan ah (oo aan cilmi-badnayn) xaqiiq ah in shaqaale faraxsan oo wax soo saar leh oo ubaahan ay u baahan yihiin caruusado aad u fiican oo kuwan oo kale ah si ay u noqdaan kuwo caafimaad qaba oo firfircoon. Waxaan rajeyneynaa inaad tan ku raaxeysatid oo aad heysatid Ciidda masiixiga oo keli ah!
Maalinta 1st ee Kirismaska, the RØDECaster Pro Podcast Production Studio, taas oo ka dhigaysa mid si fudud fududaynta waraaqaha. Markaan si fudud u idhaahdo, taasi waa hoos u dhigid! The RØDECaster Pro wax ka beddeli doona wejiga muuqaalka wax lagu qoro, oo cadeeyay inaysan ka gaabin inuu yahay midka ugu dhaqsaha badan qaybta sii kordheysa ee warshadaha warbaahinta. Qiyaas in xilligan fasaxa ah, riyadaada abuurista sawirada tayada leh ee xirfadda leh ay run noqon doonaan run oo dhan mahadnaqdan cusub oo awood leh. Maxaa ka dhigi doona xilli fasax inay ka fiicnaadaan riyooyinkiinna oo dhami oo rumoobay? The RØDECaster Pro waa jihada cusub ee cajiibka ah ee RØDE: istuudiyo mid-mid ah oo loogu talo galay waraaqaha wax lagu xayeysiinayo ee heer kasta.
Maalinta 2nd ee Kirismaska, JVC wuxuu kuxirnaaya GY-HC900, taas oo ah mid gaar ah iyo kamarad warbaahin casri ah. Marabtaa inaad ogaato sababta? Akhri! Kaamiradan ayaa ah tayada ugu sarreysa maxaa yeelay waxay sameyneysaa wax tanaasul ah markii ay timaaddo tayada muuqaalka iyadoo isla markaana ay siineyso heer isku xirnaan aan laga helin meel kale. Iyagu kuma soo darin ereyga "ku xidhan" magaca aan waxba ahayn! The JVC wuxuu kuxirnaaya GY-HC900 wuxuu muujiyaa saddex 2 / 3-inch ah dareemayaasha sawirka CMOS ee keenaya dareen sare, buuq hooseeya, iyo kala duwanaansho ballaaran. Kaamirooyinkaan iskuxiran waxaa ku qalabaysan mashiin isgaarsiin cusub oo awood leh qulqulka qulqulka ENG oo labadaba la isku halleyn karo isla markaana kharash badan kubixin sameynta News-over-IP dhab ah. Guul!
Maalinta 3rd ee Kirismaska, the CineLight 480 Super Quad ka Fluotec, soosaarid joogto ah oo BiColor Tunable DMX ah oo loo yaqaan 'Long Long Panel' oo ah qalabka nalka fudud ee aadka u sarreeya iftiin cad oo tayo fiican leh oo la isweydaarsan karo iyo nooc CCT ah oo ah min 2700 K ilaa 6500 K. Oo kaliya markii aad moodeysay inaadan u baahnayn cadaan dheeraad ah (ugu yaraan meelaha barafka), CineLight 480 Super Quad waxay soo saartaa soosaarid joogto ah oo iftiin cad oo saafi ah, taasoo ka dhigaysa iftiinka ugu weyn uguna awoodda badan suuqa oo leh soosaar fudud oo u dhigma 4 CineLight 120 oo aan u baahnayn fidin ama awood koronto. Miyaydaan ahayn "kalooriyeyaal" inaad ka walwalaysid isticmaal badan oo quwad leh - teknolojiyadda LED-ka ayaa macnaheedu yahay tan oo keliya ayaa adeegsata 835w! Horey u soco - uga tag cookies-ka Santa!
Maalinta 4th ee Kirismaska, the AJA Ki Pro GO, kanaal badan oo la qaadan karo oo loo yaqaan 'H.264' duubis oo bixiya ilaa 4-kanaal isku mar ah HD iyo duubista SD si ay uga baxaan khaanadaha USB-yada oo leh awood duubis aad u badan. Oo muxuu u muujin waayey mucjisadan? Rikoodhkan wuxuu bixiyaa xiriirinno ilaha ugu dambeeyay ee fiidiyowga, oo ay ku jiraan kaamirooyinka. The AJA Ki Pro GO sidoo kale waxay kuxirantahay AJA's tayo-sare-iskuxireyaal galaya walba si duubitaano horusocod leh looga sameyn karo walxaha isdhaxeeya, waxaana loogu talagalay ineey ahaato mid la qaadan karo ama lagu kalabixi karo leh cabbir badh-badh ah, 2RU cabbir sare, taas oo ka dhigaysa mid ku haboon waxkastoo Deegaanka waxaa loo isticmaalaa. Ha murugoon - Santa waxaay si fiican u soo buuxisay sumacaddiisa!
Maalinta 5th ee Kirismaska, Blackmagic Design's HyperDeck 8K HDR. Ho-ho-ho! Waxsoosaarkan ayaa soo bandhigaya kalsoonida lagu aaminay ee HyperDeck laguna daro cusub hal-abuurnimo sida faylalka-badbaadinta faylalka H.265, ikhtiyaar ikhtiyaar gudaha ah, 3D LUTs, 8K ee u dhashay, iyo taageerada HDR! The HyperDeck 8K HDR waxay leedahay awood ay ku duubto 8K ee wadaniga ah ee H.265, waxayna ku siineysaa isticmaalaha qiimaha kaydinta iyo hoos udhaca tayada sawirka. Muujinta naqshad casri ah iyo kontaroolo dhaqameed, HyperDeck Extreme 8K HDR ee shaashadda taabashada weyn ayaa xaqiijineysa aragtida ugu wanaagsan ee duubistaada iyo sidoo kale xakamaynta dhamaan dejimaha jaranjarada. HyperDeck Extreme waa xalka ugu fiican jiilka xiga ee baahinta, soosaarka nool, iyo saxeexa dijitaalka ah! Astaamo aad u tiro badan oo liis garayn ah! Santa mar hore way daashay! La soco !!!
Maalinta 6th ee Kirismaska, the Panasonic AJ-CX4000, Muuqaalka muraayadaha indhaha ee B4 duubista muraayadaha muraayadaha leys beddeli karo oo caadi u ah isticmaalka baahinta. Markay tahay kaamirooyinka, Santa malaha dhaadheer! The Panasonic AJ-CX4000 wuxuu ku qalabeysan yahay shaashadda muuqaalka sare ee 11MP weyn wuxuuna awood u siinayaa tayada sare ee tayo sare leh ee 4K (UHD) duubista qaraarka ah ee khadadka telefishanka 2000 TV (oo leh HDR, oo u hoggaansan BT.2100 & BT.2020). Waxaas oo dhan IYO 24-bit audio! Ma i maqashay? Dabcan waad sameysay - Thanks to this feature weyn! Xaraashka afarta 24-bit LPCM ee duubista codka ah ayaa la socda wareejinta xawaaraha sare iyo kaarka “expressP2” ama kaarka qiimaha yar ee “microP2” kaarka (kaarka xusuusta SDXC ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa) kaas oo loo dooran karo duubista warbaahinta. Waxay kaloo taageertaa duubista “AVC-ULTRA” CODEC (HD) laga bilaabo taxanaha P2HD taxanaha. UHD 60p / 50p 10-bit 4: 2: 2 wax soo saarka iyada oo loo marayo soosaarka 12G-SDI ayaa waliba suurtagal ah. Terminalka LAN, oo ku qalabeysan habka qufulka (1000BASE-T waafaqiddiisa), wuxuu taageeraa isku xirnaanta NDI | HX. Gudbinta iyo xakameynta kaamerada ayaa suurtagal ah iyada oo la adeegsanayo xiriiriyaha IP waxaana lagu xiriirin karaa nidaamka duubista / qeybinta marka lagu daro kamaradaha fog ee Panasonic. Runtii waa maalin fasax ah!
Maalinta 7th ee Kirismaska, the NewTek TriCaster Mini 4K. Qalabkani wuxuu soo bandhigi karaa dhagayste leh khibradda aragtida ugu badan ee muuqaalka leh ee lagu qeexay muuqaalka cajiibka ah iyo faahfaahinta cajiibka ah. Oo meel kasta waad ku gadan kartaa; waa mid yar oo fudud. Deji oo hel bilaabay daqiiqadihii 5. Thanks to badeecadan '4 POE ethernet dekedaha' iyo soo-gelinta fiidiyowga tooska ah ee 8, adeegsaduhu wuxuu soo saari karaa barnaamijyo, bandhigyo, dhacdooyin iyo cayaaraha tooska ah ee qaraarka, dhammaan ilaa koritaanka dhabta ah ee 4K UHD. Waad ku mahadsan tahay Plug-n-Play NDI®, shabakad dibadeed looma baahna. Ku dar NDI® aaladda iyo inta nool. Iyo modules-yada 2 PoE si toos ah ayey ugu xirmaan HDMI aaladaha isla markaaba sida NDI® ilo. Qeybta ugufiican - waad ku qulquli kartaa dhamaan kanaalka bulshada aad jeceshahay adigoo riixaya badhanka! Markaa soo qabta laba kamaradood, oo ay ku jiraan kuwaaga iPhone®, oo aad jidkaaga ku socotaa. The NewTek TriCaster Mini 4K kaa caawin kara inaad u leexiso nooc kasta oo fiidiyoow ah farshaxan gacmeed. Laakiin ha isku dayin inaad qabato Santa - taasi waa maya-maya waxayna kugu yeelan doontaa liiska xunxun ee aad qiyaasi karto!
Maalinta 8 ee Kirismaska, wax kale oo ka yimid Blackmagic Design - ATEM Mini, a qiima jaban oo noocyo badan oo kamarado casri ah udhaxeeya kaas oo ka dhigaya abuurida soosaarayaal badan oo kamarado casri ah si toos ah loogu duubo YouTube ama soo bandhigida ganacsi ee hal abuurka ah iyadoo la adeegsanayo Skype si sahlan. Adigoo si fudud isku xiraya ATEM Mini, waad iska beddali kartaa nolosha inta u dhexeysa qalabka 'kamaradaha fiidiyaha tayo sare leh ee' 4 muuqaallo tayo sare leh oo aad u wanaagsan. Xitaa waad kuxiran kartaa kumbuyuutar si aad u soo bandhigto bogagga PowerPoint ama ku dar qalabka ciyaarta. ATEM Mini waa fududahay in la isticmaalo waxayna bixisaa natiijooyin isku dhafan oo ah qaabab warbaahin oo run ah. Si aad u noolaato, ATEM Mini waxay leedahay soosaar USB ah oo u shaqeeya sida kamaradaha webka, sidaa darteed waad kuxiran kartaa barnaamij kasta oo kumbuyuutar fiidiyow ah. Waxaa sidoo kale jira HDMI fiidiyoow u bixi kuwa mashruuc samaynaya! Santa ma rumeysan tahay inuu wax fudud ka beddeli karo! Marka, imminka beddel (hel?)
Maalinta 9th ee Kirismaska, Ciyaarta Wadahadalka iZotope, aalad Qalabka Pro Tools AudioSuite plugin oo loo sameeyay dib-u-duubayaasha ku-dhawaadyaasha kuwaas oo gudbiya isku-darka dhawaaqa ugu dambeeya ee filimada iyo telefishanka barnaamijyada. Santa waa la socdaa iyaga - markay yiraahdaan tani waa aaladda xigta ee lama huraanka u ah soo-saarista kadib. Ciyaarta Wadahadalka iZotope waa aaladdii ugu horreysay ee si toos ah wax looga barto oo loo waafajiyo astaamaha dib-u-dhigga ee duubista wadahadalka. Waxay tan ku sameyneysaa iyada oo la yareynayo waqtiga loo baahan yahay in la isbarbar dhigo wada hadalka iyada oo la adeegsanayo lavalier, boom mics, iyo ADR si loo abuuro waxqabadka wadajirka ah oo wadajirka ah. The Ciyaarta Wadahadalka iZotope astaamaha waxaa ka mid ah: Isbarbardhiga mics lavalier mics to booms, Matching ADR ilaa maqalka wax soo saarka, Isbarbardhiga maqalka maxaliga ah ilaa maqalka soosaarka ee baarista iyo qulqulka luqado badan. Ku hayso dhagaystayaashaada daqiiqaddii duubista wadahadalka aan jajabanayn. Santa wuu ruxay!
Maalinta 10th ee Kirismaska, Magewell's Beddelka HDMI 4K Plus. Korsashada NewTekNDI-ga oo lacag la'aan ah® borotokoolka loogu talagalay soo gudbinta iyo gudbinta, qoyska qoyska loogu badalo 'Pro Convert' oo si fudud oo la isku halleyn karo ugu beddelaya calaamadaha fiidiyowga sida HDMI iyo SDI durdurrada NDI. Qulqulka noocan ah ee 'NDI' waxaa loo heli karaa dhammaan barnaamijyada ku habboon ee NDI-ga ee ku habboon iyo nidaamyada ku shaqeeya isku-xirnaan iyadoon loo eegin masaafad jireed, hubinta tayo sare, daahid la'aan, khibradaha wax soo saarka nool ee ku saleysan IP-ga oo ka sarreeya xalalka wax soo saarka nool ee caadiga ah. Santa wuu la dhacay! Qaybta isafgaradka ayaa leh cabbir yar oo ah 117.5mm by 66.7mm (4.63 ”oo loo adeegsanayo 2.63”) iyo 23.4mm (0.92 ”) qaro weyn, oo miisaankeedu yahay kaliya 234g. Wax yar sida ay haatan tahay, beddelaha ayaa taageera HDMI Xilliga calaamadaha '2.0' ilaa xNUMXK ee 4fps 60: 4: 4 oo ku dhejin kara durdurinta NDI illaa 4Kp4 60: 4: 2. Eeg waxa la yaabka leh Beddelka HDMI 4K Plus naftaada! Waad rumaysan doontaa…
Maalinta 11th ee Kirismaska, the Deganaanshaha Hal abuurka Adobe, barnaamij soconaya muddo sanad ah, kaas oo u oggolaanaya farshaxan yahannada soo socda inay diiradda saaraan dhismaha riyadooda. Adobe Deganeyaasha hal-abuurka leh waxay helaan marin u helista aaladaha ugu wanaagsan ee hal abuurka iyo kheyraadka, oo ay la socdaan hagida lataliyayaasha iyo xirmada magdhowga. Ugudambeyntii, deganayaashu waxay si firfircoon u daba galaan barnaamijyadooda hal-abuurka ah iyaga oo la wadaagaya hanaankooda, aragtiyadooda, iyo dhiiri gelinta ay bulshada ku hayaan. Degane kasta waxaa lagu taageeraa mushaar buuxa, dheefaha caafimaadka, latalinta, helitaanka barnaamijyada Adobe, fursadaha hadalka, iyo taageero kale oo mashruuc-gaar ah si himilooyinkooda looga dhigo mid dhab ah. WOW, Santa waxay leedahay: ha sugin! DALBADO HALKAN
Maalintii 12-aad ee ciidda Kirismaska, muxuu ahaa hadiyadda ugu weyn ee qof kasta oo ka mid ah warshadaha uu doonayo, taasina waa safar ay ku tagayaan 2020 NAB Show. Yaa. Jooji xilliyada ciidaha! Aniga ogaadaan maalinta laba iyo tobnaad ee Ciidda Masiixiga waa Janaayo 5th, laakiin waa dhamaadka! Abuuritaanka ilaa qaybinta ilaa isticmaalka, guud ahaan dhufto badan iyo dhalasho aan tira lahayn, NAB Show waa meesha ay aragti-yahannada caalamiga ahi isugu yimaadaan si ay nuxurka nolosha ugu keenaan habab cusub oo xiisa badan. Qofna ma yaqaan warbaahinta, madadaalada ama tikniyoolajiyadda sida NAB Show waana kani waa dhacdo sanadle ah oo loogu tala galay kuwa halista ku ah sheekada. Marka, aan dhammaanteen ku kulanno Las Vegas muddo 4 maalmood ah si aan u sii sii wadno shaqooyinkayaga, aan u helno aqoon, waayo-aragnimo u hesho tababbarka goynta iyo in aan kula xiriirno raad-raacyada warshadaha. Tan kaliya maahan - NAB waxay sii fideyneysaa inay ku darto Axadda! Taasi waa sax - Hadda wixii ka dambeeya, Axadda waa Isniinta cusub. NAB wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo isbaddalka maalmaha cusub ee bandhiga iyo saacadaha loogu talagalay 2020 NAB Show. Baadhid 2020 NAB Show waanan ku arki doonnaa Abriil 18 - 22, 2020 (Waxay soo bandhigaysaa Abriil 19 - 22).
Laba iyo toban hadiyadood, mid walbana laba iyo tobanka maalmood ee Kirismaska. No Sayid-a-Liqidda, Nolal Mudanayaal, iyo sida xaqiiqada ah ma swans-a-dabaasha! Marka, daloolkaaga geli dabka furan oo aad uhesho wax aad dubto! Waxay bilaabmaysaa inay u muuqato wax badan sida Kirismaska. Hal shay, in kastoo, waxaan jecelahay inaan bogaadiyo, ka hor intaanan dibadda u soo bixin - farxad Kirismas ah dhammaantiin, iyo aragti wanaagsan!
Astaamaha loo adeegsado boodhadhka ayaa laga sameeyay Freepik www.flaticon.com
2015 Udoodar Ololaha Caafimaadka Aurora / Colonie hoos bitrate Broadcast Beat Magazine Broadcast Engineer Broadcast Engineering Warbaahinta-Warbaahinta Warbaahinta-SocialMedia Broadcast-SocialMeida CES2017 tafatirka Graham Chapman Prmoted toEditor H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC immersive isovideo JCT-VC MStar dhimista buuqa SJGolden - SoftAtHome Spears & Fiilooyinka kaydinta Colonie The Colonie - News COLONIE / Chicago TV Technology TVU Networks UHD / 4K / HD viarte Video Engineer Warsaw	2019-12-14
Previous: Majaajillada cusub ee ficil, Iskuulka Iskuulka, wuxuu isticmaalaa Shogun 7 HDR Monitor / duubo si uu u siiyo Sony FS7 heshiis cusub oo nolosha ah
Next: MQL Broadcast iyo Injineerka Taageerada IT-ga